Ama-imeyili e-Outlook nezinto ezisuswe ngephutha. Susa ukuyekisa ama-imeyili we-Outlook.
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Outlook Repair Ama-imeyili e-Outlook nezinye izinto zisuswa ngephutha.
Susa Izinto ze-Outlook ngephutha? DataNumen Outlook Repair Ungazisusa!
Susa ama-imeyili nezinto ze-Outlook ngephutha:
Uma ususa i-imeyili noma enye into ku-Outlook, ngokuchofoza inkinobho "Del", khona-ke izohanjiswa ku- "Izinto Ezisusiwe”Ifolda. Ungayibuyisela ngokuvele uye ku- "Izinto Ezisusiwe”, Ukuthola i-imeyili oyifunayo, bese uyibuyisela esimweni sayo sokuqala noma kwamanye amafolda ajwayelekile.
Kodwa-ke, uma ususa into nge- “Ctrl-Del”, noma ususa leyo nto ku- “Izinto Ezisusiwe”, Bese leyo nto isuswa ku-Outlook unomphela. Ukuphela kwendlela yokuyibuyisa ukusebenzisa umkhiqizo wethu DataNumen Outlook Repair, engaxazulula inkinga njengomoya opholile, ngokulandelayo:
Khetha ifayela le-Outlook PST lapho ezinye izinto zisuswa unomphela njengefayela lomthombo le-PST elizolungiswa.
Lungisa ifayili lomthombo le-Outlook PST. DataNumen Outlook Repair izoskena futhi isuse ukususa izinto ezisusiwe.
Ngemuva kwenqubo yokulungisa, ungasebenzisa i-Outlook ukuvula ifayela le-PST elinqunyelwe bese uthola zonke izinto ezisusiwe zibuyiselwa ezindaweni lapho zisuswa khona unomphela. Isibonelo, uma usebenzisa inkinobho ethi “Ctrl-Del” ukususa i-imeyili unomphela ku- “Ibhokisi lokunge”Ifolda ke DataNumen Outlook Repair izoyibuyisela emuva ku- "Ibhokisi lokunge”Ngemuva kwenqubo yokutakula. Uma usebenzisa inkinobho ethi “Del” ukususa le imeyili kusuka ku- “Ibhokisi lokunge”, Bese uyisusa unomphela ku-"Izinto Ezisusiwe”, Bese kuthi ngemuva kokululama, izobuyiselwa ku-“Izinto Ezisusiwe"Ifolda.
Uma ungakwazi ukuthola izinto ezindaweni lapho zisuswa khona unomphela, ungazama ukuzithola ngezindlela ezilandelayo:
1.1 Zithole kumafolda “Abuyiselwe_Groupxxx”. Izinto ezisusiwe zingaphathwa njengo-lost & Izinto ezitholakele, ezitholwayo bese zifakwa kumafolda abizwa nge- “Recovered_Groupxxx” kufayela le-PST elihleliwe.
1.2 Uma wazi ezinye zezinto ezifunwayo, isibonelo, isihloko se-imeyili, amanye amagama asemqoka emzimbeni we-imeyili, njll., Ungazithatha lezi zakhiwo njengezici zokucinga, bese usebenzisa umsebenzi wokusesha we-Outlook ukusesha izinto ezifunwayo kulo lonke ifayela le-PST elilungisiwe. Kwesinye isikhathi, izinto ezisusiwe zingatholakala futhi zifakwe kwamanye amafolda noma amafolda ane-arbitrary amagama. Ngomsebenzi wokusesha we-Outlook, ungabathola kalula.
Ungaqaphela izinto eziphindiwe ezingasuswe kumafolda e- "Recovered_Groupxxx". Ngicela ungabanaki nje. Ngoba lapho i-Outlook isusa into, izokwenza amanye amakhophi ayimpinda ngokuphelele. DataNumen Outlook Repair inamandla amakhulu ukuthi ingabuyisa futhi lawa makhophi abekiwe futhi ibaphathe njengo-lost & Izinto ezitholakele, ezitholwayo bese zifakwa kumafolda abizwa nge- “Recovered_Groupxxx” kufayela le-PST elihleliwe.
Ifayela le-PST lesampula lapho i-imeyili enesihloko esithi "Siyakwamukela ku-Microsoft Office Outlook 2003" isuswa unomphela. I-Outlook_del.pst
Ifayela elitholwe ngu- DataNumen Outlook Repair, lapho i-imeyili esusiwe ibuyiselwa endaweni yayo yoqobo “Ibhokisi lokunge"Ifolda: I-Outlook_del_fixed.pst